Izindaba - Uhlelo lwamaphuzu lwenziwa egatsheni laseQingdao
Ukukhiqizwa okuhlangene kuyindlela ephumelelayo yokuphatha yenkampani, ukuze abasebenzi abakhokhile bangalahlekelwa, futhi kuvuselele ngokugcwele umdlandla wabasebenzi. Imiphumela emihle izuziwe selokhu kwaqalwa ukusebenza ehhovisi elikhulu. IGatsha iQingdao, njengegatsha elisanda kusungulwa kulo nyaka, selisebenzise ukuphathwa kohlelo lwamaphuzu ngaphansi kobuholi buka Mnu Zhang selokhu kwasebenza le nkampani, futhi lathola imiphumela emihle.
Ngo-Agasti 5th, kwabanjwa umhlangano wokuncoma ukuphathwa kohlelo lwe-Qingdao Branch. NgoJulayi, uWang Jingyi ubambe indawo yokuqala emaphuzwini, kwalandela uLiu Tingting kwezokuhweba kwasekhaya, kwathi uShen Xiuling wasendaweni yesithathu kwezorhwebo lwasekhaya. Usihlalo wenkampani, uMnu. Han, uklonyelise izindondo zegolide, zesiliva nezethusi kozakwabo abathathu abaphezulu egatsheni laseQingdao.
UMnu Zhang umemezele imivuzo yabalingani abathathu abaphezulu. UMongameli uQi wasendlunkulu usabalalise amathikithi elotho asuselwa kumaphoyinti kwabanye ozakwabo abathole amaphuzu futhi wethula ukusetshenziswa kwamathikithi e-lottery. UMnu. Han nozakwabo abavela egatsheni laseQingdao babelane ngezinhlelo zenkampani zesikhathi esizayo, futhi bakhuthaza bonke ozakwethu ukuthi badlale ngokuzimisela emandleni abo, bakhombise amakhono abo epulatifomu kaLonghua, basebenze kanzima, futhi benze impumelelo enkulu.
Uhlelo lwamaphuzu lwenziwa egatsheni laseQingdao. Ngokunakekelwa nosizo lwabaholi benkampani, abasebenzi begatsha laseQingdao nakanjani bazinikele emsebenzini wesikhathi esizayo futhi balwele ukuthuthuka kwenkampani ngombono ongcono wengqondo nomdlandla omkhulu!